စာပေ၀ါသနာရှင် ရေးတဲ့…. စာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စာပေ၀ါသနာရှင် ရေးတဲ့…. စာ
စာပေ၀ါသနာရှင် ရေးတဲ့…. စာ
Posted by manawphyulay on Sep 23, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 32 comments
တဂျီးအပါအ၀င် ရွာသူရွာသား စာပေ၀ါသနာရှင်များကိုယ်တိုင် ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို သိချင်မိတဲ့အတွက် မေးမြန်းမိတာပါ။ အားလုံး ရင်တွင်းဖြစ်လေးတွေကို ဖြေပေးကြမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
၁။ ပထမဆုံး ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်
၂။ အများဆုံးဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာပေ
၃။ လက်ရှိ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး စာအုပ်များ
၇။ လေးစားမိသော စာရေးဆရာ
၈။ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး ဘာသာပြန်စာရေးဆရာ
၉။ ခရီးသွားရင် ယူသွားဖြစ်တဲ့စာအုပ်
၁၀။ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ စာပေအမျိုးအစား ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တက်ကျမ်း၊ သုတရသစာပေ၊ ဘာသာရေးစာပေ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်နှင့်ဆိုင်သော စာပေများ၊ တက်ကျမ်း၊
ဘယ်လိုပြောရမလဲ အကြိုက်ဆုံးရယ်လို့တော့ မရှိဘူး။ အကုန်ကြိုက်တယ်။
အတော်များများ တွေ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့နဲ့တွေ့ချိန်တွေမှာ သူတို့ဆီက ဗဟုသုတတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေ အကုန်ရလိုက်ပါတယ်။
စာပေမြတ်နိုးသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက် မှန်ကန်သော ရေးသားချက်များနဲ့ ပြည်သူတွေကို စာပေဖြန့်ဝေသူတိုင်းကို လေးစားမိပါတယ်။
ပါရဂူ၊ နတ်နွယ်၊ မင်းကျော်အခြားကလောင်အမည် ကျော်လှိုင်ဦး ၊ ကျော်အောင်၊ ၀င့်ပြုံးမြင့်(ဂျာမန်ဘာသာပြန်)၊ တင်မောင်မြင့်(ဘာသာပြန်)၊
ခရီးသွားလမ်းညွှန်စာအုပ်နှင့်အတူ ရောက်လေရာဒေသမှ ရောင်းသော စာအုပ်
၁၀။ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ စာပေအမျိုးအစား ပဲ
အင်းပြောရရင်တော့ ခုလက်ရှိ ရင်ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားပြီး အပြင်ကို သိပ်မထုတ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ရေးဖြစ်တာတွေကတော့ လူငယ်တွေအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် သုတစာပေများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ပထမဆုံး ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်….မြန်မာသင်ပုန်းကြီးဖတ်စာအုပ်
၂။ အများဆုံးဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာပေ…ရသစာပေ
၃။ လက်ရှိ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး စာအုပ်များ…လက်ရှိစာမဖတ်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာနေပြီ..ပြန်ဖတ်ရအုံးမယ်
၇။ လေးစားမိသော စာရေးဆရာ….ဒါလည်းတော်တော်များတယ်
၈။ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး ဘာသာပြန်စာရေးဆရာ…မောင်ထွန်းသူ နဲ့ ဆရာပါရဂူ
၉။ ခရီးသွားရင် ယူသွားဖြစ်တဲ့စာအုပ်…စာအုပ်ယူသွားလေ့မရှိ..ခရီးအပေါ်ပဲအာရုံစိုက်တယ်
၁၀။ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ စာပေအမျိုးအစား …ရသစာပေ
ပထမဆုံးဖတ်ဖြစ်တာက – ဆရာစံ အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်။
အများဆုံးဖတ်ဖြစ်တဲ့စာပေ – နေ့စဉ်ထုတ် မဇ္ဇျိမ ဂျာနယ် ၊ နေ့စဉ်ထုတ် ရတနာပုံသတင်းစာ
လက်ရှိအဖတ်ဖြစ်ဆုံးစာအုပ် – မမျှော်လင့်သောခရီးရှည်
အကြိုက်ဆုံးစာပေ – လက်လှမ်းမှီရာ ဖတ်ရသမျှ
အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာ – Nil
အတွေ့ချင်ဆုံးစာရေးဆရာ – Nil
လေးစားမိသောစာရေးဆရာ – ဒေါက်တာခင်မောင်လွင် ( FAME )
အဖတ်ဖြစ်ဆုံးဘာသာပြန်စာရေးဆရာ – Nil
ခရီးသွားရင်ယူသွားဖြစ်သောစာအုပ် – ဖတ်လက်စ စာအုပ်
ကိုယ်ရေးချင်သော စာပေအမျိုးအစား – အဆင်ပြေသလိုရေးမိတာပါဘဲဗျာ။
၁။ ပထမဆုံး ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်…. မမှတ်မိ
၂။ အများဆုံးဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာပေ…အသက် ၃၀ မပြည့်ခင်က ရသ အဖတ်များပြီး ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ သုတနဲ့ နိုင်ငံရေး စာပေတွေ
၃။ လက်ရှိ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး စာအုပ်များ… နိုင်ငံရေးနဲ့ နွယ်တဲ့ စာအုပ်တွေရယ်လို့ပဲ ပြောရမယ်။
၄။ အကြိုက်ဆုံးစာပေ…ကြိုက်တယ် မကြိုက်ဘူး မရှိ။ ဖတ်ဖြစ်တယ် မဖတ်ဖြစ်ဖူးပဲရှိ
၅။ အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာ…ကြိုက်တယ် မကြိုက်ဘူး မရှိ။ ဖတ်ဖြစ်တယ် မဖတ်ဖြစ်ဖူးပဲရှိ
၆။ အတွေ့ချင်ဆုံးစာရေးဆရာ…တာရာမင်းဝေ နောက်ပိုင်း မရှိ
၇။ လေးစားမိသော စာရေးဆရာ….တစ်ယောက်တည်းမ ကဘူးးး
၈။ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး ဘာသာပြန်စာရေးဆရာ…ဟိ။ ဆရာ နတ်နွယ်တို့ ဆရာမြသန်းတင့်ပဲ ဖတ်ဖူးတယ်။ ကျန်တာက ဝတ္ထုတိုတွေလောက်ပဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်။
၉။ ခရီးသွားရင် ယူသွားဖြစ်တဲ့စာအုပ်…မရှိ
၁၀။ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ စာပေအမျိုးအစား …အရသာရှိတဲ့ စာပေ (ရှလွတ်) အစားအသောက် စာပေ
ကကြီး ခခွေး သင်ပုန်းကြီး
ရသ + ဘာသာပြန်
ဟိုတလောကတော့ ဗိုလ်မှုးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော စာအုပ်ဖတ်ဖြစ်တယ် ၊
တက္ကသိုလ် နန္ဒမိတ် + မောင်မိုးသူ
ခရီးသွားရင် စာမဖတ်တတ်ပါ ၊ ဟိုငေး ဒီငေးက အရသာ
၁၀။ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ စာပေအမျိုးအစား
ရွှေသွေးလား မင်္ဂလာမောင်မယ်လား မမှတ်မိ။
စုံထောက်၊ သရော်စာ၊ သည်းထိတ်ဖို၊ သရဲအကြောင်း၊ အထ္ထုပတ္တိ၊ စွန့်စားခန်း၊ ဘဝသရုပ်ဖော် (တအား ဇာတ်နာလွန်းတာတွေ တော့ မဟုတ်ဘူး)
ရွှေဥဒေါင်း၊ မင်းလူ၊ မြသန်းတင့်
သရော်စာ၊ ဘာသာပြန်(မှီးတာတွေလဲ ပါတယ်)
မောင်ပေါ်ထွန်း၊ မောင်မိုးသူ၊ မောင်ထွန်းသူ၊ ဖေမြင့်၊
ခရီးသွားခါနီးမှ အသစ်ဝယ်ပြီး ယူသွားတာများတယ် ဘယ်လို စာအုပ်ရယ် အတိအကျ မရှိ
ဖတ်ပြီးသားစာအုပ်တွေ ဖတ်တုန်း ကြိုက်ခဲ့တာရှိသလို
ခုဖတ်ပြီး ခံစားလို့ မရ လက်ခံလို့ မရတာတွေလည်း ရှိတယ်
စာရေးဆရာတွေကိုလား အတော်များများကို တပြိုင်ထဲ တွေ့ဖူးချင်တယ်
ဥပမာလေး ပြောရရင် Midnight In Paris ထဲက ဇာတ်ကောင် အိုဝင်ဝီလ်ဆင်လိုမျိုး ညသန်းခေါင်တိုင်း
တခေတ်တခါက 1920s နှစ်တွေတုန်းက နာမည်ကြီး အနုပညာရှင် တွေ ပီကာဆိုက စလို့ ဟဲမင်းဝေးအဆုံး အားလုံးကို တွေ့ရသလိုမျိုး
ရွှေဥဒေါင်းကစလို့ မြသန်းတင့်အလယ် တာရာမင်းဝေအဆုံး ဂျူးမကျန် အားလုံးကို တနေရာထဲ တပြိုင်ထဲ တွေ့ဖူးချင်တယ် ပြောတာတွေ နားထောင်ချင်တယ် စကားဝိုင်းအကြီးကြီးကို အားလုံး ရောသမမွှေထားသလိုမျိုး :mrgreenn:
တို့ဂဇက်က လေထန်ကုန်းလိုမျိုးပေါ့ သတ်ကြဖြတ်ကြဆွဲကြဖဲ့ကြ ရွဲ့ကြ မဲ့ကြ :LOL:
ခရီးသွားရင် ပုံမှန်က စာအုပ်မယူဘူး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုပြီး လေ့လာတယ် စပ်စုတယ်
ဒါပေမဲ့ လေဆိပ်တို့ ကားဂိတ်တို့မှာ ငေါင်စင်းစင်းဖြစ်နေတော့ သွားလေရာစာအုပ်သေးတအုပ်သယ်ပြီး စောင့်ရတဲ့အချိန်မှပဲ အိနြေ္ဒရအောင်ထုတ်ဖတ်တယ် .
မဟုတ်ရင် တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်နဲ့ :mrgreenn:
၁။ ပထမဆုံး ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ် – ရွှေဂေါင်းပြောင်ကာတွန်း
၂။ အများဆုံးဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာပေ – ဘာသာရေးစာပေ
၃။ လက်ရှိ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး စာအုပ်များ – မဂ္ဂဇင်းများ
၄။ အကြိုက်ဆုံးစာပေ – အကုန်ကြိုက်
၅။ အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာ – အကုန်ကြိုက်
၆။ အတွေ့ချင်ဆုံးစာရေးဆရာ – အကုန်တွေ့ချင်
၇။ လေးစားမိသော စာရေးဆရာ – အကုန်လေးစား
၈။ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး ဘာသာပြန်စာရေးဆရာ –
၉။ ခရီးသွားရင် ယူသွားဖြစ်တဲ့စာအုပ် – ကွန်ပြူတာ
အကုန်ရေးချင်နေပြီး.. အဲဒါကလည်း.. ဘာကိုမှမရေးချင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်..။
တဂျီး အပါးခိုတယ်… ဟဲ… ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူပဲ… ကူးတယ်ဆိုလဲ…
၁။ ပထမဆုံး ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ် – မောင်တီထွင်ကာတွန်း
၂။ အများဆုံးဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာပေ – ဘာသာပြန်
၃။ လက်ရှိ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး စာအုပ်များ – ဘာသာပြန်
၅။ အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာ – ဦးနု
၇။ လေးစားမိသော စာရေးဆရာ – စာရေးနိုင်သူအားလုံး အကုန်လေးစား
၈။ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး ဘာသာပြန်စာရေးဆရာ – ဖေမြင့်
၉။ ခရီးသွားရင် ယူသွားဖြစ်တဲ့စာအုပ် – အကုန်သယ်ချင်တာ မနိုင်လို့
၁၀။ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ စာပေအမျိုးအစား – နည်းပညာဆောင်းပါး ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် ထိုင်ပြီးတော့ကို ဘာသာပြန်ပေးနေချင်ပါသည်။ ကိုယ်ကလည်း အဲ့လောက်မတတ်။ ကလေးတွေ မြန်မာလိုဖတ်ဖို့တော့ စိတ်အား ထက်သန်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးလေး တွေ့လို့ကတော့ တို့တောင် မတို့ကြလို့ပါ။
တစ် – အဖြစ်နိုင်ဆုံးက တေဇ
နှစ် – လိုင်းစုံ၏
သုံး – ကိုလိုနီခေတ်နှင့် လွပ်လပ်ရေးခေတ်အတွင်းတွင် ရေးသားခဲ့သော စာအုပ်များ
လေး – စုံ၏
ငါး – မေးခွန်းအမှတ် (၇) အတွက် အဖြေကိုကြည့်ပါ
ခြောက် – အတော်များသည်
ခွန် – မေးခွန်းအမှတ် (၅) အတွက် အဖြေကိုကြည့်ပါ :mrgreenn:
ရှစ် – မြသန်းတင့်၊ ရွှေဥဒေါင်း၊ ဒဂုန်ရွှေမျှား
ကိုး – ဖတ်လက်စ စာအုပ် (သို့မဟုတ်) စာအုပ်စင်မှ ကြုံရာတစ်အုပ် (နောက်ပိုင်းတွင် ဖုန်းထဲမှ ebook)
တစ်ဆယ် – မာဃစာပေ (စိတ်ထဲရှိသည်ကို ရှိသလို ပုံစံမျိုးစုံ ပေါင်းစပ်မွှေကာ ရေးသားတတ်သော စာပေအမျိုးအစား)
စင်ပေါါ်က အဆို တော် က ပရိတ်သတ်ကို မိုက်ခွက် ထိုးပေး သလို ခံစားရတယ်
မနောမေးထားတဲ့မေးခွန်းကို မနောက အရင် ဖြေသင့် တယ်
ကျမ ကတော့ ဘာတွေကြိုက်ပါတယ်ဆိုပြီး
ကဲ လေးပေါက်ရေ… ဖြေပေးတော့လေ မနောလည်း ဖြေပေးပြီးပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ရပါတော့သည်…..
၁။ ပထမဆုံး ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ် – ကျောင်းစာကလွဲလို့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လူကြီးတွေ မသိအောင် ခိုးဖတ်ခဲ့တာကတော့ The First long kiss ။ ကိုးတန်းမှာ ဖတ်ခဲ့တယ်။ သများက အဲ့သလောက်တောင် ဇွဲနပဲကြီးတာ ဟိဟိ။
၅။ အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာ – အများကြီးပါပဲ။
၆။ အတွေ့ချင်ဆုံးစာရေးဆရာ – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။
၁၀။ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ စာပေအမျိုးအစား – နိုင်ငံရေး။
ပထမဆုံးဖတ်​ဖြစ်​တဲ့ စာအုပ်​က မ​သေချာဘူး ။ အဲ့ ၀တ္ထုထဲက ဆိုရင်​ ​ဇော်​​ဇော်​​အောင်​ရဲ့ စိုး​အောင်​-မြတ်​သစ်​ ဇာတ်​လမ်းတွဲ​တွေပဲ ။
အဖတ်​အများဆုံးက​တော့ ​ပြောရခက်​တယ်​ ။ ဘာလို့ဆို အ​ပျော်​ဖတ်​ စာအုပ်​​တွေကလွဲရင်​ တွတ်​ပီ တို့ ၀ိဇ္ဇာတို့ ဗျူးတို့ ကာတွန်းအထိ က​လေး​တွေနဲ့ လုဖတ်​လို့ ။
ခု​လော​လောဆယ်​ ဖတ်​​နေတဲ့ စာအုပ်​က ဂျူး – ဆုံ​နေရက်​နဲ့
အကြိုက်​ဆုံး စာ​ပေ – အားလုံးဟာ သူ့နည်း သူဟန်​နဲ့ ​ကောင်း​နေတာပဲ ။
အကြိုက်​ဆုံး စာ​ရေးဆရာက များတယ်​ ။ အ​ထောက်​​တော်​လှ​အောင်​ ၊ ​မောင်​သာရ ၊ မြသန်းတင့်​ ။ သာယာဝတီ စမ်းစမ်းနွဲ့ ၊ နုနုရည်​( အင်းဝ) ၊ မိုးမိုး ( အင်းလျား ) ၊ ဂျူး ။ ​ပြေ – ​ဆေး ၂ ၊ နိုင်​​ဇော်​ ၊ ​တော်​​တော်​များတယ်​ ။
မကြိုက်​ဆုံးစာ​ရေးဆရာက လွန်းထားထား ။ အကြည်​​တော်​ ။ မိုးစက်​ ဘာဆိုလား ။
အ​တွေ့ချင်​ဆုံး စာ​ရေးဆရာ – မရှိ
အ​လေးစားဆုံး – အားလုံးကို​လေးစားပါတယ်​ ။
အဖတ်​ဖြစ်​ဆုံး ဘာသာပြန်​ဆရာက လက်​လှမ်းမှီ သ​လောက်​ ​တော်​​တော်​များများ ဖတ်​ဖူးတယ်​ ။
အကြိုက်​ဆုံး ကဗျာ ဘာသာပြန်​က ​မောင်​သားနိုး
အကြိုက်​ဆုံး ကဗျာဆရာက ​ဖော်​​ဝေး ​မောင်​​ချောနွယ်​ ​အောင်​ချိမ့်​ ​မောင်​​လေး​အောင်​
​နောက်​ ​တွေးမိရင်​ထပ်​​ပြောမယ်​ ။ ခု​လော​လောဆယ်​​တော့ ဒီ​လောက်​ပဲ ။
၁။ ပထမဆုံး ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ် ( မှတ်မိဘူး.. ပထမဆုံး ပုံကြည့် နောက်စာဖတ်ဆိုတော့.. ထင်တယ်.. စာနဲ့ပုံနဲ့တွဲပြီး စာအုပ်လို့ ခေါ်တဲ့ အရာဆိုရင် မိုးသောက်ပန်း သို့မဟုတ် တေဇ စာစောင်ပဲ… )
၂။ အများဆုံးဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာပေ ( ခုလက်ရှိဆိုရင် ဂဇက်စာပေပေါ့.. အဲ့ထဲမှာ ရသအပါများရင်.. ရသပေါ့… တကယ်ပြောတာပါ.. အပြင်မှာ စာဆိုပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆိုရင် အိုင်တီအတွက်လောက်ပဲ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်… )
၃။ လက်ရှိ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး စာအုပ်များ ( နံပါတ် ၂ နဲ့ သွားတူတယ်.. ကျွန်တော့်အတွက်ဆိုရင်… စာအုပ်ပဲပေါ့.. E Book ဆိုတော့… )
၄။ အကြိုက်ဆုံးစာပေ ( ဖောက်ထွက်တဲ့ စာပေတွေ… )
၅။ အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာ( သစ္စာနီ၊ ကိုတာ၊ တာရာမင်းဝေ၊ နန္ဒသိန်းဇံ၊ မင်းခိုက်စိုးစန်၊ ပါရဂူ တော်တော်များပါတယ်.. တချို့ကတော့ သူများတွေ ပေးလို့ ဖတ်ပြီး ကြိုက်တယ်.. ရှာဖတ်ဆို မရှာဖြစ်ဘူး.. လင်းယုန်မောင်မောင်လဲ ကြိုက်တယ်.. တအုပ်ပဲ..ဖတ်ဖူးတယ်.. ကြီးသူကြီးကို လုပ်ကြံရန် ဟစ်တလာရဲ့ အကြံလေ… အော် ဂျူးလဲ ကြိုက်ပါတယ်… )
၆။ အတွေ့ချင်ဆုံးစာရေးဆရာ( မုံရွေးက စာရေးဆရာတွေ တော်တော်များများနဲ့ တွေ့ချင်ပါတယ်… )
၇။ လေးစားမိသော စာရေးဆရာ ( ကိုယ့်ထက်တော်တာပဲ အကုန်လေးစားပါတယ်… )
၈။ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး ဘာသာပြန်စာရေးဆရာ ( ဒဂုန်ရွှေမျှားပေါ့… )
၉။ ခရီးသွားရင် ယူသွားဖြစ်တဲ့စာအုပ် ( ခရီးသွားရင်တော့ ကွမ်းရယ်၊ ဘီယာရယ်၊ သီချင်းရယ်ပဲ ယူဖြစ်တယ်.. ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ပြီး ၂ လုပ် ၃ လုပ် တခါတည်းလုပ်လို့ရတယ်လေ… )
၁၀။ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ စာပေအမျိုးအစား ( မရေးတတ်သေးတာပဲ ရှိတယ်… ဖောက်ထွက်တဲ့ စာတွေ ရေးချင်ပါတယ်.. ကိုတာရဲ့ ဖြန့်ကျက်တွေးခြင်းလို၊ Albert Camus ရဲ့ Ousider လို၊ တာရာမင်းဝေ တို့လို ရေးတတ်ချင်ပါတယ်… )
ဟုတ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ သံစဉ်သံလှိုင်း စိတ်ခိုင်းစေရာ စာအုပ်လည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။
အမကို ကြိုက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာ့ အားတွေတောင် ရှိသွားတယ် တကယ်။ ဒါပေမယ့် အမက ဂျာမန်ဘာသာပြန် မဟုတ်ဘူး။ အင်္ဂလိပ်ပြန်တာပါ။ ဖြစ်နိုင်တာက ပြန်ခဲ့တာတွေထဲမှာ ဂျာမန်စာအုပ်ကများနေလို့ ဒီလိုထင်သွားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
အလက်ဇင်းရေ – သံစဉ်သံလှိုင်းစိတ်ခိုင်းစေရာ ကတော့ အလက်ဇင်း အဖတ်သင့်ဆုံးစာအုပ်ပါပဲ။ စာအုပ်က ဆာရီယာယ်လစ်ဇင်စစ်စစ်။ အလက်ဇင်းမှာ အဲဒါ အငွေ့အသက်ရှိတယ်။ ဆာရီယာယ်လစ်ဇင် တွေဟာ အားသိပ်ကောင်းတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို ရူးလောက်အောင်လည်း တတ်နိုင်တယ်။ အမစာအုပ်ကို ဖတ်ဖူးတဲ့ယောက်ျားတွေ အမကို တော်တော်ကြွေကုန်တယ်။ အနုပညာမှာ ဆာရီယာယ်ဟာ အဲဒီလောက်တောင် လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကြီးတယ်။ ကိုသူရ အဲဒါကို ဇောင်းပေးသင့်တယ်နော်။ ဒါက လုပ်ယူလို့ မရဘူး။ မွေးရာပါသန္ဓေတစ်မျိုး။
ကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ် ဖတ်နေတယ် ။
နာမည်ကြား ရုံနဲ့ ဖျားလောက်တဲ့ ကဗျာ..
အကြောင်း ညီညွတ်တဲ့အခါ…ပြန်ပြောပြမယ်… ။
ဒါနဲ့… အစ်မရဲ့ သံစဉ်သံလှိုင်းစိတ်ခိုင်းစေရာ ကို…ဘယ်မှာ ရှာရမလဲ…
E Book အဖြစ်… ရရင် ကောင်းမယ်
မနောပြောတာက ဂျာမန်ဘာသာပြန်ဆိုတာ ဘူဒင်ဘရွတ်ကို ပြောတာပါ။ ဟစ်တလာ မီးရှို့တုန်းက ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါ။ မိသားစုတစ်စုရဲ့ ကျရှုံးခန်းစာအုပ်ပေါ့။ သူက ဂျာမန်ဘာသာပြန်မဟုတ်ဘူးလား မမ
ဘူဒင်ဘရွတ်ခ်က မူရင်းစာရေးဆရာက ဂျာမန်စာရေးဆရာ သောမတ်စ်မန် ပါ။ အဲဒါကို HT Lowe Porter က အင်္ဂလိပ်ပြန်ထားတာကို အမက မြန်မာပြန်တာပါ။ ဘူဒင်ဘရွတ်ခ်ဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အုပ် ၁၀၀ ၀င်ထဲက တစ်အုပ်ပါ။ သောမတ်စ်မန်ရဲ့ စာအုပ် ၂အုပ်ဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးစာအုပ် ၁၀၀ ထဲမှာ ပါတယ်။ အဲဒီနောက်တစ်အုပ်ကတော့ Magic Mountain ပါ ညီမ။ ဆရာနတ်နွယ်က အမကို ဘာသာပြန်ဖို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် စာခက်လွန်းတာကြောင့်ရော၊ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ပြီးရင် ချောင်ထိုးခံရမယ်ဆိုတာလည်း သိလို့ စိတ်ကုန်ပြီး ဘာမှမလုပ်တာ။ ဆရာနတ် ပြောသွားတော့ စိတ်ထဲမှာ အဲဒါလုပ်ဖို့ ကြွေးကျန်သလိုဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်တော့များမှ လုပ်ဖြစ်မယ် မသိဘူး။
၁။ ပထမဆုံး ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ် – မမှတ်မိ
၂။ အများဆုံးဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာပေ – ဂွဇက်ရွာကစာတွေ
၃။ လက်ရှိ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး စာအုပ်များ – ဘာသာပြန်
၄။ အကြိုက်ဆုံးစာပေ – ခရီးသွားဆောင်းပါး
၅။ အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာ – Nothing Special
၆။ အတွေ့ချင်ဆုံးစာရေးဆရာ – မရှိ
၇။ လေးစားမိသော စာရေးဆရာ – လေးစားစရာကောင်းအောင်ရေးတဲ့သူတိုင်းကို လေးစားပါတယ်။
၈။ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး ဘာသာပြန်စာရေးဆရာ – မောင်ပေါ်ထွန်း
၉။ ခရီးသွားရင် ယူသွားဖြစ်တဲ့စာအုပ် – ဓမ္မမှတ်စုစာအုပ်လေးများ၊ ကိုယ်တိုင်ရေး Notebook
၁၀။ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ စာပေအမျိုးအစား – ရွာထဲဝင် comment ပေးခြင်း၊ Reply ပြန်ခြင်း၊ Status တင်ခြင်း တွေပဲရေးချင်တယ်လို့။
၁။ နောက်ဆုံးဖတ်ဖြစ်မယ့် စာအုပ် …. သေခါနီးမှဘဲ ဖြေပါမယ်
၂။ လုံးဝမဖတ်ဘဲ ဖယ်ထားတဲ့ စာပေ …. တရားစာအုပ်
၃။ လက်ရှိ ပယ်ထားတဲ့ စာအုပ်… ညစ်ညမ်းစာပေ
၄။ အမုန်းဆုံးစာပေ …. ညစ်ညမ်းစာပေ
၅။ အမုန်းဆုံး စာရေးဆရာ … အောင်ရင်ငြိမ်း
၆။ မတွေ့ချင်ဆုံးစာရေးဆရာ … အောင်ရင်ငြိမ်း
၇။ မလေးစားထိုက်သော စာရေးဆရာ …. အောင်ရင်ငြိမ်း
၈။ ဘာသာပြန်အညံ့ဆုံး စာရေးဆရာ… မရှိ
၉။ အိမ်မှာ ခေါင်းအုံးအိပ်လေ့ရှိတဲ့ စာအုပ်… အဘိဓာန်
၁၀။ ကိုယ်မရေးချင်တဲ့ စာပေအမျိုးအစား …. ညစ်ညမ်းစာပေ
တကယ်တော့ ညစ်ညမ်းစာပေထက် ပိုဆိုးတာက ရှိသေးတယ်။ ညစ်ညမ်းစာပေဟာ ဒီလောက်ကြီး ကြောက်စရာမကောင်းဘူး။ ကြားဆင့်တစ်ဆင့်ကို ဖြတ်သန်းသွားရုံလောက်ပါပဲ။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ အပျော်ဖတ်စာပေလိုပေါ့။ မြီးကောင်ပေါက်တွေအတွက် အပျော်ဖတ်ကို အရင်စရတာ။ ပြီးတော့မှ တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်သွားတာ။ အမလည်း အပျော်ဖတ်ကနေ စတာပါပဲ။ ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတယ်ဆိုရင်လည်း အပျော်ဖတ်က စတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ အပျော်ဖတ်ဆိုတဲ့ ကြားခံစာပေတစ်ခု မရှိရင် အထက်တက်ဖို့လည်း ခက်ရော။ ညစ်ညမ်းစာပေလည်း ဒီလိုပဲ။ အပျော်ဖတ်နေရာမှာ ၀င်လာတဲ့ စာပေတစ်မျိုးပေါ့။ တော်တော်ကြာရင် အဲဒီကနေ တက်သွားမှာပဲ။
.တကယ်ဆိုးတဲ့စာပေဆိုတာကတော့ ပြောတောင် မပြောရဲဘူး။ ပြောလိုက်ရင် အမကို ၀ိုင်းဆော်ကြတော့မှာပေါ့။ လူတွေကို မှိုင်းသွင်းသလို အိနြေ္ဒသိက္ခာရှိရှိ ၀ါဒဖြန့်တာမျိုး။
သိပ်​မှန်​တာ​ပေါ့ ဗျာ ဆရာမ​ပြောလိုက်​တာနဲ့ မျက်​စိထဲ တန်းကနဲ မြင်​မိတာက​တော့ မင်းသိင်္ခ ဆိုတဲ့ လူကြီးပဲ ။ ဘာသာ​ရေးမှိုင်း အယူအဆ​ရေး မှိုင်း ​ကောင်း​ကောင်း သွင်း​ပေးခဲ့သူ​ပေါ့ ။
ကျန်တာ တွေ ကတော့ ဇဝေဇဝါမို့ မပြောတတ်။
အတွေ့ချင်ဆုံး စာရေးဆရာ တစ်ယောက် ရှိနေတယ်။
Amy Chua ပါ။
သူ့မှာ ရေးထား တဲ့ စာအုပ်အများကြီး မရှိပါဘူး။
အဲဒီ ထဲ ကမှ ၂ အုပ်ဘဲ ဖတ်ဖူးပါတယ်။
အကြိုက်ဆုံး တစ်အုပ်ကတော့ ဆယ်ကျော်သက် သူ့သမီးသူပုန်မလေး နဲ့ တိုက်ပွဲ အကြောင်းပေါ့။
သူ့ကို တွေ့ပြီး ကျေးဇူးစကားပြောချင်တယ်။
ကိုယ့် သူပုန်လေး ကိုလဲ သူ့ စာအုပ်က သွယ်ဝိုက်ပြီး ဆုံးမပေးလို့ပေါ့။
လောကထဲ ဒီလို သူပုန်အမေ ရှိမှန်း ကို ကိုယ့် သူပုန်လေး လဲ သိသွားလို့ပေါ့။
ဒါကြောင့် သူ့စာအုပ် တွေ ကို ဆက်မျှော်နေဆဲ။ lol:-))
ပထမဆုံး အနော်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာအုပ်ကတော့ ရဲမာန်ရဲ့ ဓမ္မရသပုံပြင် ကာတွန်းပါဗျ။ ဝတ္ထု စဖတ်ဖြစ်တာက မှတ်မှတ်ရရ ၈တန်းကျောင်းသားဘဝ သိုင်းဝတ္ထုတွေ ပလူပျံနေတဲ့ အချိန်တုန်းကပေါ့ဗျာ။ ဖတ်လိုက်တာ မိုးလင်းပေါက်ပဲ(ဒါတောင် အိမ်ကလူတွေ မသိအောင် ခိုးဖတ်ရသေးတာ)။ နောက် ၁၀တန်းလောက်မှ ဟာသဝတ္ထုမှာကျတော့ အကြည်တော်ကို စဖတ်ဖြစ်တယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာကျတော့ ရသပိုင်းဆိုင်ရာ ဒဿနဆန်ဆန်လေးတွေဖတ်ဖြစ်လာတယ်။ အခု ကျောင်းပြီးလို့ အလုပ်လည်း ဝင်တော့ ဘာသာပြန်တွေဖတ်ဖြစ်လာတယ်။ ဓမ္မစာပေတွေလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံးရယ်လို့တော့ မရှိဘူးဗျ။ ရေးနိုင်သူတွေ အားလုံးကို အကုန်နှစ်သက်ပါကြောင်း။ ရေးနိုင်တဲ့ စာရေးဆရာတွေနဲ့ အကုန်တွေ့ချင်သေးတယ်။ စာရေးချင်စိတ်ကတော့ ဦးငှက်(ထူးအိမ်သင်) စကားကို ငှားပြောရရင် အကြည်ဓာတ်တွေ ခမ်းခြောက်နေလို့ မရေးနိုင်သေးပါ။ ဒီလောက်ပါပဲ တော်သေးဘီ(ခွက်ဒစ်တူ အဘဖော)
ဒါဆို အကြိုက်ချင်းတူနေပြီ မနောလည်း သိုင်းဝတ္ထုတွေ အရမ်းဖတ်တယ် အခုမဟုတ်ပါဘူး ငယ်ငယ်တုန်းက ပြောတာပါ စာအုပ်မဖတ်ခိုင်းလို့ ခိုးတောင် ဖတ်ရတယ်။ ခုထိတော့ ရေခဲတောင် ကြာပွင့်မစားရသေးဘူး။
၁။ ပထမဆုံး ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ် ကလေးဂျာနယ် ဖြစ်ဘို့များတယ် ။ ပထမဆုံး ဖတ်ဖြစ်တဲ့ဝတ္တုကတော့ မင်းအသက်ငါ့ပေး ဆရာကြီးမြခိုင် …………..စုံထောက်ဝတ္တု ၅ တန်း မှာစ ဖတ်ဖြစ်တာပါ.
၂။ အများဆုံးဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာပေ ရသ နွယ်သော စာများ နဲ့ ၀တ္တုတိုများ
၃။ လက်ရှိ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး စာအုပ်များ ဂျုာနယ် တွေဘဲဖတ်ဖြစ်တော့တယ်
၄။ အကြိုက်ဆုံးစာပေ ရသ စာ ပေ နဲ့ ပြုပြင်ရေးဆောင်းပါး
၅။ အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာ ရွှေဥဒေါင်း လူထုဦးလှ လူထု ဒေါ်အမာ မောင်သာရ မြသန်းတင့် ငြိမ်းကျော် သုမောင် နေ၀င်းမြင့် ခင်ဆွေဦး မိုးမိုးအင်းလျား နုနုရည်အင်းဝ မြနှောင်းညို ဂျူး
၆။ အတွေ့ချင်ဆုံးစာရေးဆရာ သူတို့စာတွေ ကို သာ ဖတ်ချင်ပါတယ် လူ ချင်း တွေ့ ဆုံ ဘို့ ရင်းနှီး ဘို့ ဆန္ဒမရှိပါ
၇။ လေးစားမိသော စာရေးဆရာ အတော်များများ
၈။ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး ဘာသာပြန်စာရေးဆရာ မောင်ပေါ်ထွန်း ကျော်ေ အာင်
၉။ ခရီးသွားရင် ယူသွားဖြစ်တဲ့စာအုပ် အခုတော့ ဖုန်းထဲမှာ အများ ကြီး ထည့် ထားတယ်
၁၀။ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ စာပေအမျိုးအစား ကတော့ ကျနော် အမြဲ လက်ရှိရေးနေတဲ့ စာ အမျုိးအစားတွေပါဘဲ
ကဲ တာ ၀န်ကျေဘီနော်
ဒါနဲ့ လေးပေါက် စာအုပ်တွေ ဘယ်နှအုပ်ထွက်နေပြီလဲ ခုထိလက်ဆောင်လည်း မပေးသေးဘူး။
ဟုတ် ကျနော် စာအုပ် တစ်အုပ်မှ မထုတ်ရ သေးပါဘူး
စာအုပ်ထုတ်မယ်လို့ ပြောထား သူ တစ်ယောက်နဲ့ အစီအစဉ်ကလဲ ပျက်သွားပါတယ်
ကျနော်မှာ စာ အုပ်ထုတ်ဘို့ ကိုယ်ပိုင်ငွေ အပို မရှိ သလို ထုတ်ဝေသူနဲ့လဲ မချိတ်ဖြစ်ပါဘူး
အဲတော့ စာအုပ်ထုတ်ဖြစ်ဘို့ ဆို တာက ဆယ် ရေး တစ်ရေး ကိုးရေး တစ် မသေချာ တော့ ပါဘူး
အဲ တော့ ဘယ်သူ့ မှ လဲ လက်ဆောင် မပေး ရ သေးပါ ဘူး ခင်ဗျာ
၁။ ပထမဆုံး ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်…. ကျောက်ခေါင်းတလားနှင့်ရွှေကြေးပြား
၂။ အများဆုံးဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာပေ… တရုတ်သိုင်း
၃။ လက်ရှိ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး စာအုပ်များ… စီမံခန့်ခွဲမှု
၄။ အကြိုက်ဆုံးစာပေ… သမိုင်း၊ခရီးသွား
၅။ အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာ… မင်းသိင်ခ
၆။ အတွေ့ချင်ဆုံးစာရေးဆရာ… မရှိ
၇။ လေးစားမိသော စာရေးဆရာ…. ချစ်ဦးညို၊မင်းလူ၊တာရာမင်းဝေ
၈။ အဖတ်ဖြစ်ဆုံး ဘာသာပြန်စာရေးဆရာ…မရှိ
၉။ ခရီးသွားရင် ယူသွားဖြစ်တဲ့စာအုပ်… မရှိ
၁၀။ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ စာပေအမျိုးအစား … မရှိ